Moe Kai: Italy trip
ဘာမင်ဂန် အမျိုးသမီး အသင်းကတော့ အခု အင်္ဂလန်ရဲ့ အတော်ဆုံး ဒုတိယ အသင်းဆိုတော့ ဥရောပမှာပါ ဝင်ကစားနေရတာပေါ့။ ဒီဘောလုံးသမားတွေနဲ. ထွက်ရတဲ့ ခရီးကတော့ ပျော်စရာကြီးပါ။ အားလုံးက အလွန် ပြောင်ပြောင်နောက်နောက်နဲ. ခရီးတခုလုံး လေယာဉ်ပေါ်မှာပါ ဆူညံလို.ကို နေပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာထဲက သွားရတဲ့ Coach/Bus ကားကြီးက အထဲမှာ အိမ်သာ၊ Microwave, စားပွဲ အားလုံး အရမ်းကို သက်တောင့်သက်သာ နိုင်ပါတယ်။ အီတလီ Verona ကို ရောက်ပြီဆိုတော့လဲ လာကြိုတဲ့ လူနဲ. ဘတ်စ်ကား ကြီးက အဆင်သင့်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ဘောလုံးကွင်းကို အရင်ဆုံးသွားပြီး အစမ်း လေ့ကျင့်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းကို မြင်တော့ အရမ်းကြီးပြီး ခမ်းနားလွန်းတော့ ဒီမှာ MAN U ဘောလုံးကွင်းကို သွားလည်တုန်းက အတွေ.အကြုံကိုတောင် သတိရမိပါသေးတယ်။
လေ့ကျင့်တာ Training ပြီးတော့ အချိန်က ည ၁၀နာရီကျော်ပြီမို. ဟုိုတယ်ပြန် စားကြ သောက်ကြပါတယ်။ အီတလီအစာကတော့ Pasta နဲ. အသားတွေ အစုံအလင် မြောက်များစွာ4meals course ကျွေးပါတယ်။ အဆီတွေ အလွန်များလွန်းတော့ ကျမရဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ အတွက်တောင် စိတ်ပူရပါတယ်။
နောက်နေ. မနက်စောစောကိုတော့ မြို.ထဲ လျှောက်လည်၊ ရိုမီယို ဂျူးလီယက်ရဲ့ မြို.၊ အိမ်တွေရဲ့ ချစ်စရာ ဝရန်တာလေးတွေ လျှောက်ကြည့်နဲ၊ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြ အဲဒီလိုနဲ. မနက်ခင်းကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။
နေ.လည်ခင်းမှာ အားကစားသမားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ အရင် ဒါဏ်ရာတွေ အမြန်စစ်ဆေးစမ်းသပ်၊ taping ၊Soft tissue treatment ဆိုတာတွေ အမြန် လုပ်ဆောင်ပြီးတော့ ကစားရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းကို သွားမယ်ဆိုတော့ ရဲကားနဲ. Emergency Blue Light နဲ. ခေါ်သွားခံရတာပါ။ အင်္ဂလန်မှာ Blue Light နဲ. သွားတဲ့ မော်တော်ကားဆိုတာ Police, ambulance တွေ အရေးပေါ်အတွက်ပဲ သုံးတာပါ။
ဘောလုံးကွင်းကိုရောက်တော့ ဟုိုက Paramedics ဆေးအသင်း ဆရာဝန်တွေနဲ. နှုတ်ဆက် မိတ်ဆက်ပြီးတော့ တယောက်ယောက်များ ဒါဏ်ရာရရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ နဲနဲ ဆွေးနွေးရပါတယ်။ သူတို.တွေက အင်္ဂလိပ်လို မပြောနုိုင်တော့ ကျမမှာ အတော် စိတ်ပူခဲ့ရပါသေးတယ်၊ ဒါဏ်ရာများရက ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ဆိုပြီးတော့ပါ။ တော်ပါသေးတယ်။ ဘယ်သူမှ ဒါဏ်ရာကြီးကြီးမရ။
ဘောလုံးက လုံးတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း၊ ကျမတို.အသင်းက အရမ်းဖိကစားပြီး ပိုတော်ပြီး တချက်ချက် ကျွန်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးနဲ. နောက်ဆုံးတော့ ကျမတို.ရှုံးပါတယ်။ အပြန်ခရီးကတော့ အရှုံးနဲ. တိတ်ဆိတ်နေမယ် ကျမထင်ခဲ့တာ လုံးဝကို မှားပြန်ပါတယ်။ တသင်းလုံး အတင်းတောင်းဆိုမှုနဲ. ကျမတောင် အာပြဲကြီးနဲ. သံစဉ်မမိပဲ သူတို.အတွက် Ronan Keating's "When you say nothing at all" သီချင်းကို တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ. ဟဲပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။ သြ အားကစား စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ဒါပဲ ထင်ပါရဲ။